Zucchini Lasagna: Anonaka, anoshanda uye ane hutano mapepa!
Shiraplant lasagna: zvinonaka uye zvinoshanda zvekubika kuti iwe unakirwe!
Zvokudya	 13 January 2019
A zucchini lasagna chisarudzo chine hutano uye chakanakisa kuita iyi yekuItaly dhishi iyo yave yeBrazil pamusoro pemakore. Zucchini inotsiva hupfu hwegorosi hupfu uye hunonaka, kunyanya kune avo vanofarira uyu muriwo.
Mune inotevera misoro iwe uchave nesarudzo dzinoverengeka zucchini lasagna mapepa ane akasiyana uye akanakisa zvinonaka zvigadzirwa. Ona yega yega uye sarudza akati wandei kuti uite kumba!
Zucchini lasagna nechizi
Lasagna isina chizi muBrazil inenge isiri lasagna. Naizvozvo, zucchini lasagna mapepa anoda chizi, kunyangwe iwe uri vegan, kune avo vasingadye chero chinhu chemhuka.
Inotevera nzira inonaka ye zucchini lasagna nechinonaka chegratin chizi. Buda!
3 yakakura zucchinis
100 magiramu eMinas chizi
100 magiramu e grated parmesan chizi
350 magiramu akachekwa mozzarella chizi
Olive mafuta, gariki uye mhiripiri
Kutanga iwe unocheka zucchini muzvidimbu zvezvimedu kuti ushandise sehupfu. Vamwe vanhu vanokanya zucchini kana kutobika iyo vasati vaiisa pabheka, sarudzo ndeyako wega.
Iwo magiramu zana eMinas chizi acharungwa negariki, mhiripiri uye nemafuta mashoma. Inguva yekuungana. Isa rukoko rwekutanga rwe zucchini, iyo Minas chizi, mafuta mashoma emaorivhi, mozzarella uye imwe dura rezucchini. Pedzisa ne zucchini uye mozzarella dura pamusoro.
Preheat oven uye wobva warega lasagna ichibika kwemaminitsi makumi maviri pamusoro pekupisa kwepakati. Chikamu chepamusoro chechizi chinozoita brown uye iwe unowedzera zvishoma grated Parmesan chizi, uisiye kwemaminitsi mashanu muchoto uye uibvise, yakagadzirira kudyiwa.
Kana yako pfungwa iri yekuwedzera kugwinya uye yakajeka kicheni, iyo inotevera recipe yakakwana kune yako dhayeti!
2 kana 3 zucchini
30 gramu yechiedza mozzarella chizi
3 tomato muto
100 gramu yeturkey zamu
150 gramu yekottage cheese
Parsley, chives uye nutmeg
Iwe unocheka zucchinis kutanga kuungana. Wobva wagadzira musanganiswa wekottage nemunyu, nutmeg, parsley uye chives. Mukuwedzera kune muto wemadomasi uyo zvakare unofanirwa kuve wakagadzirira.
Ino yave nguva yekuungana. Wedzera zvidimbu zucchini, musanganiswa wekottage uye turkey chipfuva. Pedzisa nechero zucchini, tomato muto uye mozzarella chizi. Isa muchoto uye kana chizi yatsvukiswa, chiratidzo chekuti chagadzirira. Zvinotora maminetsi makumi maviri kusvika makumi matatu.
Verenga zvimwe nezve zvinonaka uye zvinoshanda zvekubika kugadzira kumba!
Kana iwe ukasadya chero chinhu chemhuka, iyi nzira inonaka!
2 yakakura zucchinis
maorivhi, munyu, mhiripiri
vegan mozzarella chizi
3 makapu ehuswa hwakatsva howa
2 makapu etomato muto
Sanganisa mafuta, munyu uye mhiripiri nezvakachekwa zucchini uye wozvibika mu skillet usati watanga kuunganidza ndiro.
Mune tini, isa zucchini, vegan chizi uye howa. Ita izvi kusvikira wapedza neyekupedzisira layer ye zucchini, wedzera tomato muto, basil uye vegan Parmesan. Bika kwemaminitsi makumi maviri uye zvese zvagadzirwa.
[junkie-alert style = "green"] Zvakadii nezve kudzikisa huremu nekudya? Tsvaga 101 YAKANAKA KABHUKU ZVINOBVARIRA uye dzidza maitiro ekugadzira chikafu chinonaka uye chinonaka nezvinhu izvo zvinokubatsira iwe kurasikirwa uremu nekukurumidza! [/ junkie-yambiro]
Zucchini lasagna nenyama
Yakanakisa sarudzo ye zucchini lasagna ine nyama ndeyekugadzira zucchini ine bolognese muto, chizi uye ham. Ganda kusvikira wekupedzisira zukini asara uye nekusasa chizi pamusoro kuti brown.
Ese mapheka ane zucchini akaderera carb, sezvo pasina pasita kana chero imwe mhando yehydrohydrate.
Ricotta inogona kushandiswa panzvimbo yechiedza mozzarella chizi mune inoenderana recipe. Inopisa uye yakatowedzera kugwinya.
Imwe sarudzo yeiyo yakakodzera nzira ndeyekuchinja zamu rehuku kune shredded huku. Izvo zvakare zvinonaka uye zvine hutano.
chingwa zucchini lasagna
Nzira yakanaka kwazvo yekuita yako zucchini lasagna ndeyekudya muriwo. Shandisa muzai, upfu uye fry. Iyo yakanyanya caloric sarudzo, asi inonaka kwazvo.
lasagna mumucheka mutsvuku
Zucchini lasagna ine bolognese muto inogona zvakare kuva chena muto. Ipapo iwe unopisa mukombe wemukaka nechipunu chegorosi, nutmeg, munyu uye mhiripiri chena. Kurudzira kusvikira wakora uye muto wagadzirira kuwedzera kune lasagna.
Kana iwe uine chero imwe zucchini lasagna recipe mazano, ndokumbirawo uvanyore mune zvakataurwa pazasi!
Vegetarian Recipes: Wedzera izvi zvinonaka kune yako menyu!
Detox Kudya: Dzidza maitiro ekudzora uremu nehutano!
Dhijitari fiber uye kukosha kwayo!
Gumbo Exercises: Dzidza maitiro ekugadzira makumbo ako